Ciidan taageersan madaxweyne Haadi oo Xuuthiyiinta dib uga celiyey gobolka Laxa ee koonfurta Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamo taageersan madaxweynaha dalka Yemen, Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa ku guuleystay iney fashiliyaan isku-day Kooxda Shiicada ah ee Xuuthiyiintu ku doonayeen iney ku qabsadaan gobolka Kaxaj ee koonfurta dalkaas, sidaas waxaa laga soo xigtay ilo milateri ah.
Wararka ka imaanaya gobolkaas ayaa sheegaya in ilaa 132 gaadiidka dagaalka oo ay wateen Xuuthiyiintu ay isku dayeen saaka oo isniin ah iney galaan deegaanka Kirshi oo ka tirsan gobolka Laxaj, hase ahaatee waxaa halkaas dib uga celiyey ciidamo taabacan madaxweyne Haadi.
Dalka Yemen waxaa hareeyey fodwo kadib markii Xuuthiyiintu qabsadeen caasimadda dalka ee Sanca iyo gobollo kale, islamarkaana madaxweynaha iyo wasiiro dhowr ah ka ceyriyeen halkaas.
Woqooyiga iyo Koonfurta dalka Yemen ayaa laga baqayaa inuu ka dhex qarxo dagaal sokeeye, waxaana labada dhinac ciidamo xoojin tubeen bartamaha dalka.
Xuuthiyiinta oo taageero ka hela dalka Iran ayaa todobaadkan ku dhawaaqay iney ku duulayaan koonfurta dalka si ay ula dagaalamaan taageerayaasha madaxweyne Haadi oo ku sugan magaalada Cadan iyo ururuka Alqaacidda ee Jaziiradda Carabta.
Kooxdaan ayaa shalay la wareegay qeybo badan oo ka mid ah magaalada Taciz, iyadoo aan wax dagaal ah halkaas ka dhicin